မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများမှဒီအလွန်ကိုအထူးပြန်လည်သုံးသပ်မှာလိင်ဂိမ်းများများအတွက်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြောပြရန်အားလုံးအကြောင်းပါအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်နှင့်အတူသင်တို့များကိုသတင်းအချက်အမိန့်၌သင်လိုအပ်အနေနဲ့အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဖြစ်စေမသင်ချင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းရနိုင်ရန်အတွက်သင်၏လက်ကိုအပေါ်အကောင်းဆုံးအချို့ဂုဏ်သမီးများစွာဖြစ်နိုင်။ ဆိုရင်ဆက်သွယ်ထားသောနေရာနှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်း၊နားလည်သင့်ရဲ့အပျော်အပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးစွန်သောအာရုံစူးစိုက်၊နှင့်မြေတပြင်လုံးအတွေ့အကြုံလိမ့်မည်လိုက်မျက်နှာသို့ဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်။, သို့သော်၊ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားလည်းကြိုဆိုဒီဂိမ်းပဲသွားခံရဖို့အနည်းငယ်ပိုပြီးအခြေခံပညာအထက်သင်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ! ယခုအဖြစ်အဘို့လိင်ဂိမ်းများ၊ကျနော်တို့စတင်ထွက်ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅ နှင့်ဖန်တီးချင်တယ်အကောင်းဆုံးမင်းပြောက်များအတွက်ပတ်ပတ်လည်ကလူအတူဖုန်းများပျော်မွေ့ချနိုင်မှကသူတို့လို။ ကျွန်တော်ငြင်းပေးရန်အတွက်သာမန်အဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဤသို့ဝေး၊ပြပြီသောကမ္ဘာပျော်မွေ့ချင်လျှင်သင်အလွန်အကောင်းဆုံးအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းပျော်စရာ၊ကျွန်တော်တော်တော်အများကြီးပဲစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်အလုပ်။, ဒါကြောင့်စိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ၊အဘယ်မျှလောက်ကျနော်တို့အပေါ်ဆက်လက်စူးစမ်းအပြည့်အဝပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ္းအခြေအနေ? အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ချစ်ကြတာပေါ့အရာကိုငါတို့သည်အတွင်းအပြင်!
လျင်မြန်တဲ့အကြည့်မှာပင်ဂိမ်းရမည်ကိုပြသဖို့ရှိတယ်လို့သင်အများကြီးတစ်ငရဲ၏ခေါင်းစဉ်ထွက်ရှိခဲ့ကြကြောင်းပြေးအထွက်တံခါးနှင့်တော်တော်အများကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ရန်။ Cyberpunk ၂၀၇၇ ဂန္ထဝင်ဥပမာဖြစ်တယ်:ကျနော်တို့ချင်ကြပါဘူးဖို့မည်သူမဆိုကဲ့သို့ခံစားရဘာကိုဖွင့်နေကြောင်း၊ဒါကြောင့်အစားသြင္းရရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့များ၊လိင်အပေးသည်၊ဒါကြောင့်အားလုံးအခမဲ့။, ယခုသင်ထင်စေခြင်းငှါ၊ဒါကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကြည့်ရှုမှာအောင်မြင်မှုများ၏အရပ်ကဲ့သို့:သွားနှင့်လမ်းကြောင်းနှင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပြီးသို့အတူတကွတင်ထားတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့မော်ကွန်း၏ၡမ်ားအန္းခေါင်းစဉ်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါ၊သင်တို့အဘို့အကိုအကာအကွယ် jerker? ဒါဟာဆိုလိုသည်၊အကျွံကုန်ကျ၊ဒါကြောင့်သင်သည်မပြုလျှင်ပျော်မွေ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုထုတ်ပြီးလျှင်ဘူးပါ၊ဒါဟာအယူအဘယ်သူမျှမစွမ်းသမျှရုံထဲထွက်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လာ။, လိင်အလိုတက်စောင့်ရှောက်ဖို့အဆင့်အဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်တို့လည်းအများရှိသည်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဟာအလွန်အမင်းလှုံ့ဆျောအလုပ်မှနေ့နှင့်ညကိုဖန်တီးရန်အပူဆုံးခေါင်းစဉ်။ ခါ:ကျနော်တို့ငြင်းဘို့အနည်ထိုင်ဖို့ထက်လျော့နည်းအကောင်းဆုံး၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်တိတ်တဆိတ်သို့ညဉ့်အခါကျွန်တော်တို့အတွက်လာနိုငျလူးနှင့်ဟစ်နှင့်အတူအပူဆုံးအန္းညမ်း playables။
အားလုံးသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဒီမှာပြုသောအမှုအားဖြင့်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ရန်ခက်ခဲရသည့်အရွယ်ရောက်-ဆက်စပ်အက်ပ်ရဲ့အဆက်မပြတ်ထောက်ခံအားဖြင့်ကိုဂေ။ ကြီးစွာသောအရာကဤအချက်သည်အားလုံး၏အချက်အလက်သိမ်းဆည်းဖို့အတိမ်နှင့်သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးခုံတက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအတူအချက်အလက်ကမသုံးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်းအထူးမိုဘိုင်းဒေတာပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းဒီတော့လျှင်သင်အဖြစ်ကန့်သတ်ဘယ်လိုကြွလာသောအခါအများအပြားတိုးျနိုင်၊အရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်ပိုကောင်းအထဲကငရဲအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးအပေါ်ကြောင်းဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုမကစားသွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထင်။, အားလုံးသင့်တိုးတက်မှုသည်ကယ်တင်ခြင်းအတိမ်ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်သင်အကြားပြောင်းလဲထုတ်ကုန်နှင့်ပြန်လာသင်လိုချင်တာအခါတိုင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ခြင်း။ ကျွန်မတို့ဟာအလွန်ကြီးစွာသောအစုအစည္းမ်ား၏အင်္ဂါအဖြစ်အပြည့်အဝများအတွက်လမ်းညွှန်များအားလုံး၏မိုဘိုင်းလိင်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်၊ဒါကြောင့်သင်မည်မဟုတ်ဝဲရမည်သည့်အဆင့်မှာ။ ဟုဆိုကြကုန်အံ့အပေါ်အခြေခံပြီးအကြံပေးရန်ကျနော်တို့ထို့ကြောင့်ဝေး၊ဧကန်အမှန်ချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယျသို့လိင်အတတ်ကို XXX ဂိမ်းကစား။
လိင်အရင်းသင့်သည်မွေ့လျော်ဖို့အခမဲ့အဘို့၊ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအထင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအတွက်သင်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်ဤအစက်အပြောက်များအတွက်သင်သည်ကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်အမြင်ကအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ ဘူးသောအသံကဲ့သို့အစီအစဉ်? ကောင်းပြီ၊သတင်းကောင်းအကြောင်းသင်သာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်အနည်းငယ်နှိပ်ရထဲမှာ၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်အပြည့်အဝအလားအလာများလိင်ဂိမ်းများများအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဦးစလုံးအဘို့ကောင်းတစ်ခုအချိန်နှင့်အချိန်အကြာ–ဒါကြောင့်လုံခြုံသင့်ရဲ့အစက်အပြောက်နှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာ၏အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းအင်တာနက်ကိုအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။, လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်–သင်၏အချိန်အတွင်းအပြင်!